Covid-19 waa cudur faafa. Tallaalku waxa weeye habka ugu fudud/haboon ee loogaga hortagaayo in cudurka si xun loogu jirado ama loogu dhinto.
Waxa cirbada tallaalka lagaa siinayaa cududa. Dhamaan dadka 18 sanno jir ah iyo waxa ka weyn ayaa cirbad saddexaad ama mid afaraad loo soo jeedinayaa. Qofka 18 sano jir ka yar ayaa heli doona laba cirbadood. Waxa cirbadaha lagu kala siin doonaa marar kala duwan.
Qaado dhamaan cirbadaha laguu soo bandhigaayo. Markaas ayaad difaac wanaagsan oo Covid-19 kaa ilaaliya helaysaa.
Weydii shaqaalaha daryeelka caafimaadka haddii ay jirto wax aad iska weydiinayso. tallaalkaaga.
Waa in aanad is tallaalin haddii aad leedahay qandho ama calaamado covid-19 ah. Sug ilaa intaad hadana ka soo roonaaneyso.
Waxaad yeelan kartaa cududda oo ku xanuunta, madax xanuun, inaad daal dareento maalinta ugu horreysa ee tallaalka ka dib. Waxa sidoo kale dhici karta inaad barafoowdo/dhaxamooto, aad qandho yeelato ama ay laabatooyinka iyo murquhu ku xanuunaan. Waxa loo yaqaanaa saameynta xun waxaanay caadi u tahay carruurta iyo dadka waaweyn ee tallaalka qaata.
Saameynta xun ee tallaalka ee aan caadiga aheyn
Malaayiin qof ayaa covid-19 iska tallaalay. Waa wax aan caadi ahaan dhicin inaad saameyn xun yeelato ka dib markaad tallaalka qaadato. Waxa ka khatar weyn inaad covid-19 si xun ugu xanuunsato.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan uurka iyo Covid-19 ka akhri.
Carruurta ayaa Covid-19 aad ugu xanuunsan karta, inkastoo aanay taasi wax caadi ah aheyn. Carruurta da'doodu tahay 12 sano jir iyo wixii ka weyn ayaa sidaas darteed tallaalka loo soo bandhigayaa. Carruurta qaar marka laga soo bilaabo 5 sanno jirada ayaa tallaalka Covid-19 la siin karaa. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa cudur xun oo sanbabada ah. Dhakhtarka ilmaha daaweynaaya kala hadal wixii idinka idin khuseeya.
Kala hadal dhakhtar haddii aad horey u yeelatay xasaasiyad aad u xun taas oo aad u baahatay inaad isla maalintaasba daryeel caafimaad raadsato. Waxa taas keeni kara tallaal, dawo ama wax aad cuntay.
Tallaalka covid-19 waxa loo sugay si la mid ah sida taxaddirka badan leh ee tallaalada kale. Malaayiin qof oo dad waaweyn iyo carruurba leh ayaa tallaalka qaatay iyadoo cilmi baadhayaal ay daraasad saameyntiisa ku sameeyeen. Waxa sii socota in tallaalka daraasad lagu sameeyo.
Waxa uu Covid-19 kugu dhici karaxitaa haddii lagu tallaalay. Laakiin dadka la tallaalay badankoodu xoog uma xanuunsadaan.